Ka Qeybgal La’aanta FARMAAJO ee Caleemo-saarka Geelle, Ma Go’doon Siyaasadeed Mise Ikhtiyaar? – somalilandtoday.com
(SLT-Muqdisho)-Madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa sabtidii ka baaqday ka qeybgalka xafladda caleemo-saarka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, arrintaas oo noqotay hadalheynta bulshada, su’aalana la iska weydiiyey sababta iney noqon karto go’doomin.
Farmaajo sannadkii ugu dambeeyey waxaa uu isku koobay Eritrea iyo Ethiopia taasi oo keentay in Soomaaliya ay noqoto saxiib la’aan dunida, gobolka iyo ugu dambeyntii qas gudaha ah.
Soomaaliya waxaa daris la ah saddexda dal ee kala ah Kenya, iyo Itoobiya, labada madaxweyne ee Uhuru Kenyatta iyo Ismaaciil Cumar Geelle ma fiicna xidhiidhka ay la leeyihiin Farmaajo, isaga oo Nairobi xidhiidhka u jaray Hiil-walaalka ugaba hiililiey Asmara, una arko Djibouti dal cadow ku ah masaalixda Soomaaliya.
Marka laga soo tago inuu Farmaajo ku hungoobey iskudey kasta oo uu galaangal ugu sameyn lahaa gudaha Mareykanka, kuna booqan lahaa dalkaasi. Farmaajo markii uu laba sanno ku darsaday, waxaa ay isku dhaceen diblomaasiyiinta shisheeye ee ku sugan gudaha Soomaaliya, taas oo keentay labo tillaabo iney qaadaan reer galbeedka gaar ahaan dalalka taageera maamulkiisa, bixiyana kabka miisaaniyadda 60%.
Soomaaliya waxaa ka dhisan shan maamul, waxaa xusid mudan in laba ka mid ah maamulladaasi kana taliya dhulka ugu weyn Soomaaliya aaney Farmaajo salaanta iska qaadin, taasi oo ku tuseysa siyaasadiisa arrimaha gudaha heerka ay joogto.
Ugu dambeyntii, ka baaqashada Farmaajo ee caleemo-saarka madaxweyne Djibouti waxa ay xidhiidh la leeyahay go’doomintaas uu kala kulmay dunida, gobolka iyo dunida isaga oo maanta ay kusoo hadheen oo keliya la taliyeyashii gaadhsiiyey heerkaas.